Dropbox paLinux: kubva kune yepamutemo app kana kubva kunyaradzo, unosarudza | Linux Vakapindwa muropa
Kuwana kweDropbox kubva kuLinux terminal uye kuburikidza neapp
Kusvikira nguva isiri yapfuura, iko kunyorera kwe Dropbox Yaingowanikwa chete yeWindows, Mac OS X uye Anrdoid, ichifanira kugutsikana newebhu vhezheni yegore yekuchengetedza sevhisi. Asi ikozvino kwatova .deb uye .rpm mapakeji e32-bit uye 64-bit Linux kugoverwa. Iko kune zvakare tarball nekodhi kodhi yekuisanganisa uye kuiisa pane chero kugoverwa kweLinux. Kana iwe uchida kuisa iyo Dropbox application kuishandisa kubva kuLinux, unogona kuwana iyo dhawunirodhi nzvimbo yewebhusaiti yepamutemo uye tsoka.
Nekudaro, pane imwe sarudzo yekuwana Dropbox kubva kuLinux kugovera uye izvo zviri kuburikidza nekoni. Kana isu tichida kushandisa iyo yekuchengetedza gore sevhisi uye isu tisingade kumisikidza yepamutemo kana isiri yeDropbox graphic vatengi, iyi ichave iri nzira yakanakisa yekuzviita. Iko kune yekuraira mutsara wakavakirwa mutengi (CLI) iyo yakanyorwa mumutauro we scripting uye inogona kushandiswa mu bash.
Kuti tishandise, isu ticha dhawunirodha script uye tigoita kuti iitwe nekunyora zvinotevera:
Kuti uwane, isu tinongoshandisa rairo iyo inoita script:
Ipapo ticha https://www.dropbox.com/developers/apps uye isu tinogadzira account nyowani. Kuti uite izvi, tinya paGadzira App uye zadza data rakakumbirwa. MuZita reApp tichaisa zita ratiri kuda kupa kuchishandiso, semuenzaniso "db_up". Mukutsanangurwa tinokunyorera iwe tsananguro pfupi yechinangwa cheapp. MuKuwanika kana isu tichida kuti App igone chete kuwana iyo folda (App dhairekitori), kana kune vese (Yakazara). Pakupedzisira tinodzvanya bhatani reGadzira uye tichava neakaundi nyowani yakagadzirira. Cherekedza iyo kiyi yeApp, App chakavanzika uye Rudzi rwekuwana, sezvo izvi ndizvo izvo script ichatibvunza. Ramba uchifunga kuti mune iyo script, painobvunza mhando yekuwana (Kuwana), iwe unofanirwa kuisa A mune kana ukasarudza App dhairekitori kana F kuitira kuti Uzere.
Iye zvino zvinotipa kero yatinofanira kupinda mubrowser iyo inotibvunza isu data reDropbox account yedu kubvumidza iko kunyorera. Paunenge wapedza, pinda ENTER mune terminal uye script ichagadziriswa. Kana tikaenda ku / kumba / dhairekitori remushandisi tichaona kuti faira rakavanzika rinonzi .dropbox_uploader rakagadzirwa nedata rakapinda.
Kana zviri zvekushandisa, zviri nyore, isu tinonyora mune terminal tambo yekuita iyo script inoteverwa nemirairo yatinoda (kurodha pasi, kurodha pasi, kudzima, rondedzero, info, unlink, ...) pamwechete nematanho:
Ngatitarisei mimwe mienzaniso:
Kuti uwane rumwe ruzivo iwe unogona kuverenga iyo README faira inouya neiyo script yawakadhinda. Ndinovimba ichakubatsira.
Mamwe mashoko - Kopa: nyowani yekuchengetedza gore sevhisi inowanikwa yeLinux
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Kuwana kweDropbox kubva kuLinux terminal uye kuburikidza neapp
Maitiro ekuisa Virtualbox pane Debian uye Ubuntu (uye zvigadzirwa)